Jan Koum: Onye isi ọrụ na onye guzobere WhatsApp arụkwaghịm n'ọnọdụ ya | Akụkọ akụrụngwa
Onwa ole na ole gara aga abachala ndi mmadu kachasi ike na Facebook na ulo oru ndi mmadu. Mana odi ka nsogbu ndia akwubeghi. N'ihi na ugbu a arụkwaghịm nke CEO na onye guzobere WhatsApp. Anyị na-ekwu maka ya Jan Koum onye ka kpughere ugbu a na ọ na-ahapụ ọnọdụ ya n'ụlọ ọrụ ọ hiwere. O yiri ka esemokwu na mmekọrịta dị njọ Mark Zuckerberg nwere ọtụtụ ihe ime mkpebi a.
Ebe ọ bụ na ha abụọ nwere echiche dị iche iche banyere nchekwa data, nzuzo na izo ya ezo. O yiri ka ihe ọhụrụ Zuckerberg mere, iji jikọta WhatsApp na Facebook, si otú a wepu nnwere onwe ya, ọ nọghị Jan Koum nke ọma.
Ọ bụ ya mere i ji kpebie ịhapụ ọrụ gị na ụlọ ọrụ ahụ. Dabere na ụfọdụ mgbasa ozi, Onye isi ochichi Facebook chọrọ ime ka sistemụ zoro ezo na WhatsApp. N'ụzọ dị otú a, ọ nwere ike ịnweta data njirimara ma jiri ya maka ebumnuche azụmahịa. Nke a abụghị ihe Koum nwere mmasị na ya.
N’ezie, mgbe ọ na-aga nke ọma, onye isi ụlọ ọrụ WhatsApp ekwughi okwu banyere nsogbu ọ bụla ma ọ bụ asịrị a. Da nke ọ gwala ụlọ ọrụ ọfụma dị mma. Zuckerberg n'onwe ya meghachikwara omume site na ịza ajụjụ na a ga-atụ uche ya ọtụtụ ihe. Nakwa ikwu okwu ekele maka ihe ị mụtara.
Ọchịchị Jan Koum gbara arụkwaghịm wee bụrụ ọnwụ ọhụụ nke abụọ na WhatsApp kemgbe afọ gara aga. Maka na 2017 anyị hụrụ ka Brian Acton si hapụ ụlọ ọrụ mgbe ha mụsịrị banyere asịrị ahụ na njikwa nke data njirimara. Yabụ na ọnweghị ndị guzobere ozi ozi ahụ nọ na ụlọ ọrụ ahụ.
Nke a dị ka ọ na-enye Zuckerberg nnwere onwe ịgbanwe usoro WhatsApp n'uche.. Ihe ọtụtụ kwuru ga-amalite n'oge adịghị anya. Yabụ anyị kwesịrị ị atta ntị na mgbanwe ndị ga-abịakwute ngwa ahụ n'ime izu na ọnwa ndị na-abịanụ wee hụ ma ọ bụrụ n'ezie na mgbanwe mgbanwe dị na ya
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Noticias » Jan Koum, onye nchoputa na onye isi nke WhatsApp, rituo